24kw-1800kw တတ်အင်ဂျင် Generator ကို ပေးသွင်း,ထုတ်လုပ်သူ - Fmwpower.com
တတ်မီးစက်တစ်စုံ တတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။
ပါဝါစ Range: 1800kw မှ 24kw
တတ်မီးစက် နီးပါးလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် မီးစက်တစ်စုံ ပါဝါဘူတာရုံစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုများတွင်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။ တတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်လုပ်နိုင်တဲ့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်ပေး။ ၏တနျခိုးအကွာအဝေး တတ် genset နေ 24kw အထိ 1800kw ။
1. တတ်အင်ဂျင် Generator ကိုပင်မ Specification
Dongfeng တတ် Generator ကို
ချုံကင်းတတ် Generator ကို
2. တတ် Generator ကို Se t ကို
မီးစက်တစ်စုံတတ်အင်ဂျင်ကို အနိမ့်ဆူညံသံမီးစက်တစ်စုံ cummins အသံတိတ်မီးစက်တစ်စုံ cummins set ကိုထုတ်လုပ်တတ် တတ်မီးစက်တစ်စုံ တတ် genertor
လွန်ခဲ့သော : 12kw-300kw ရီကာဒိုအင်ဂျင် Generator ကို
နောက်တစ်ခု : 24kw-160kw lovol အင်ဂျင်မီးစက်
ဘာသာရပ် : 24kw-1800kw တတ်အင်ဂျင် Generator ကို